Adiga Keliya Maaha Halganka Falanqaynta | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 6, 2014 Axad, Oktoobar 5, 2014 Douglas Karr
Waxaan bixinay qeexitaanka falanqaynta iyo sidoo kale liiska dhammaan suuqgeynta internetka Analytics waxaad ka heli kartaa inuu kaa caawiyo cabirka saameynta xeeladaha suuqgeyntaada. Sida aad ku arki karto qaar ka mid ah tirakoobka hoose, in kastoo, suuqleydu ay sii wadaan inay la halgamaan iyaga Analytics xulashooyinka iyo natiijooyinka. Waxaan aaminsanahay xudunta tan inay taasi tahay Analytics badanaa waxay bixisaa tan macluumaad ah, iyadoon la siinin wax talo bixin ah oo xalka ah.
As Analytics softiweerku wuxuu noqdaa mid horumarsan, macno samaynaya dhammaan xogta waxay umuuqataa hawl daal badan; laakiin ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay cabiraan cida, maxay tahay, whys, iyo howshooda ganacsigooda si ay u wanaajiyaan yoolalka suuq geynta iyo sida loogu guuleysto. Wadada Mainstreethost
Waa kuwan xiisaha leh marketing Analytics tirakoobka laga soo qaatay infographic:
CMOs waxay soo sheegaan inay kharash gareeyaan 8% miisaaniyadooda suuq geynta falanqaynta suuq geynta.
By 2015, suuqgeynta Analytics kharashka ayaa la filayaa inuu kordho 60%.
Sannadkii hore, Ololayaasha Maareynta Maareynta ee isku dhafan in ka badan 4 kanaal oo dijitaal ah ka fiicnaaday hal ama laba kanaal 300%.
40% urur suuq geyn ballaaran ayaa horumarin doona a dariiqa xawaaraha leh suuq geyn isku dhafan.
60% suuqleyda ayaa raadinaya xulashooyinka falanqaynta ee ku jira qalabka maareynta warbaahinta bulshada.
Kala badh shirkadaha oo dhan halgan ugu jiraan sidii si hufan loogu qaban lahaa loona lafa guri lahaa macluumaadka kana yimid kanaallo badan oo warbaahinta bulshada ah.
Ugudaminta-guji astaan waa qaabka ugu caansan ee cabbiraadda natiijooyinka warbaahinta bulshada.
Tags: falanqayntafursadaha falanqayntaAnalyticsmiisaaniyadda falanqayntatirakoobka falanqayntadhacawarbixinta ololaharaadinta ololahaguji ugu dambayn lahaanshahafalanqaynta suuqgeyntatirakoobka falanqaynta suuq geynta